Ị nọ ebe a: Home / Videos / Video Ihe Monsanto - Freaky! Na-ekpughe! A ghaghị ịhụ!
GMO ma obu BỤGHỊ GMO! Nzaghachi bụ ...
Otu enyi m zitere m ozi-e na njikọ gbasara vidiyo na Monsanto! Ndị enyi, ndị ọrụ, ebe ị nọ, onye ọ bụla ị bụ nke a bụ video vidiyo. Ajuju nke ozi na-aga n'ihu na ihe ziri ezi ruo n'ókè.